မဘသ သည်​ ၅ပါးသီလမ​ပြောနဲ့ တစ်​ပါး​သီလေ အင်္ဂါရပ်​နဲ့ ​​တောင်​မလုံပါဖူး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမဘသ သည်​ ၅ပါးသီလမ​ပြောနဲ့ တစ်​ပါး​သီလေ အင်္ဂါရပ်​နဲ့ ​​တောင်​မလုံပါဖူး
Than Than သန်းသန်း
ပါဏာတိပါတ အင်္ဂါ နှင့်​ မညီခြင်း
လူသတ္တဝါတစ်​​ယောက် တစ်​​ကောင်​ ​သေရ​အောင်​ အမုန်းတရား ပွဲဆူ​အောင်​ လှုံ့​ဆော်​မှိုင်းတိုက်​​ပေး​ခြင်းသည်​
ထို့အတွက်​​ကြောင့်​ no မဘသ ပါ
ရယူလို​သောစိတ်​ရှိခြင်းသည်​ အချက်​ငယ်​ ၁ ပါ
သူတစ်​ပါးဥစ္စာဖြစ်​ခြင်း ကံ ထ​မြောက်​၍
No ပါ မဘသ ​ရေ
ကာ​မေသု မိစ္ဆာာစာရ အင်္ဂါ
ဝီရသူသည်​ ကမာရွတ်​မြို့နယ်​တွင်​ ချိင်း​မွှေးမရှိ​ကြောင်း လက်​​မြှောက်​ ၍ တီဗွီကင်​မရာအရိုက်​ခံကာ နိုင်​ငံသိ တိုင်းပြည်​သိ​အောင်​
ကာယကြွားလုံးထုတ်​ ၍ လုံးလပြခြင်း ဆန္ဒပြခြင်း​ကြောင့်​
Noပါ မဘသ သံယာ
မဘသ ​ခေါင်း​ဆောင်​ ဝီရသူသည်​
ထို​ကြောင့်​ မဘသ ဝီရသူသည်​
အချက်ငယ်​ ( ၁ ) သုရာ= ယစ်​မူး​စေ​သောအရာ တစ်​ပါးကို မှီဝဲသူဖြစ်​၏
၅ ပါးသီလ နှင့်​ မဘသ သံဃာ​တော်​များသည်​ ပါဏာတိပါတကံ အင်္ဂါနှင့်​ မညီညွတ်​ပါ​ကြောင်း တင်​ပြအပ်​သည်​
ထို့အတွက်​​ကြောင်​ မဘသ ကို Noပါရှင်​
Than Than သန်းသန်း
← မဂ်င်္​တောင်​ညွန့်​ အကြမ်းဖက်​ ဖြစ်​စဉ်​တွင်​ စစ်​တပ်​မှ ပြည်​ထဲ​ရေးအသွင်​​ဆောင်​ ပါဝင်​ ကြိူးကိုင်​သူ ရဲ​ဘော်​တင်​လှိုင်​မြင့်​
တနေ့က သာကေတကိစ္စနဲ့ မနေ့က တောင်ညွန့်ကိစ္စ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ အမ.ျားကြီး ပေမဲ့ မြန်မာမွတ်စလင် ကိစ္စ သူတို့လူမျိုးတွေနဲ့ ဆိုင်မှ မဆိုင်တာ အနေသာကြီးဘဲလေ →
5 thoughts on “မဘသ သည်​ ၅ပါးသီလမ​ပြောနဲ့ တစ်​ပါး​သီလေ အင်္ဂါရပ်​နဲ့ ​​တောင်​မလုံပါဖူး”
May7at 8:15pm ·
(၁) သေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ် အသွင်ရှိခြင်း
(၂)ရဟန္တာအသွင် ရှိခြင်း
(၃) အရီယာနှင့်တူသော အကျင့်ရှိနေခြင်း
(၁၃)သ ဓမ္မ အကျင့်ကို အားထုတ်ခြင်း
(၁၅)သုတ်လွှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကာမဂုဏ်ကို ဖယ်ကြဉ်ခြင်း၊
(၁၇) အဋ္ဌကထာ ခေါ်အကျယ်အနက် သင်ယူခြင်း
(၁၈ ) သီလ၊သမိာပညာဂုဏ်တို့တွင်မွေ့လျော်ခြင်း၊
(၂၀) ဘုရားရှင်သတ်မှတ်သော သိက္ခာပုဒ်များကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း
May7at 8:09pm ·
သိက္ခာချခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိသည် ရဟန်းသီလကို ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောကြားခြင်းပင် ဖြစ်သည်၊ သိက္ခာချပြီးနောက်ပါရာဇိကအမှုများကို ကျူးလွန်ပါက ရဟန်းမဟုတ်တော့ပြီဖြစ်၍ ပါရာဇိကအာပတ်မသင့်တော့ပါ၊ ပါရာဇိကကျ ပြီးသော ရဟန်းမှာလည်း သီလသိက္ခာမရှိတော့ပြီဖြစ်၍ သိက္ခာချရန် မလိုတော့ပါ၊ သိက္ခာ ချရာ အောက်ပါအချက် (၆)ချက်နှင့် ပြည့်စုံရမည်။
၁။ အမှန်တကယ် ရဟန်းအဖြစ်ဖြင့် မနေလိုခြင်း(သိက္ခာချလိုစိတ်ရှိခြင်း )၊
၂။ သတ်မှတ်ထားသည့် သိက္ခာချ စကားလုံး မှန်ကန်ခြင်း၊
၃။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြင့် ပြောဆိုခြင်း၊
၄။ နှုတ်ဖြင့် ပီသစွာဆိုခြင်း၊ (လက်ဟန်ပြခြင်း၊ စာရေးခြင်းဖြင့် သိက္ခာချ လျှင် သိက္ခာမကျချေ၊)
၅။ ထိုပြောဆိုသောစကားကို နားထောင်သူ (သိက္ခာချပေးသူ) မှာ လူသား စင်စစ်ဖြစ်ခြင်း၊
၆။ နားထောင်သူက ချက်ခြင်း နားလည်ခြင်း။
သိက္ခာချ စကားလုံး ၂၆-လုံး
၁. ဘုရားကို စွန့်ပါ၏။ (ဗုဒ္ဓံ ပစ္စက္ခာမိ)
၂.တရားတော်ကို စွန့်ပါ၏။ (ဓမ္မံ ပစ္စက္ခာမိ)
၃.သံဃာတော်ကို စွန့်ပါ၏။ (သံဃံ ပစ္စက္ခာမိ)
၄.ရဟန်းသိက္ခာကို စွန့်ပါ၏။ (သိက္ခံ ပစ္စက္ခာမိ)
၅.၀ိနည်းတော်ကို စွန့်ပါ၏။ (၀ိနယံ ပစ္စက္ခာမိ)
၆.ပါတိမောက် (၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ် မာတိကာ) ကို စွန့်ပါ၏။ (ပါတိမောက္ခံ ပစ္စက္ခာမိ)
၇.၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ် အကျဉ်းချုပ်ကို စွန့်ပါ၏။ (ဥဒ္ဒေသံ ပစ္စက္ခာမိ)
၈.ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို စွန့်ပါ၏။ (ဥပဇ္ဈာယံ ပစ္စက္ခာမိ)
၉.ဆရာကို စွန့်ပါ၏။ (အာစရိယံ ပစ္စက္ခာမိ)
၁၀.အတူနေတပည့်ကို စွန့်ပါ၏။ (သဒ္ဓိဝိဟာရိကံ ပစ္စက္ခာမိ)
၁၁.အနီးနေ တပည့်ကို စွန့်ပါ၏။ (အန္တေ၀ါသိကံ ပစ္စက္ခာမိ)
၁၂.ဥပဇ္ဈာယ်တူ ရဟန်းကို စွန့်ပါ၏။ (သမာနုပဇ္ဈာယကံ ပစ္စက္ခာမိ)
၁၃.ဆရာတူတပည့်ကို စွန့်ပါ၏။ (သမာနာစရိယံ ပစ္စက္ခာမိ)
၁၄.အတူနေ သီတင်းသုံးဖော်ကို စွန့်ပါ၏။ (သဗြဟ္မစာရိံ ပစ္စက္ခာမိ)
၁၅.အကျွန်ုပ်ကို လူဝတ်ကြောင်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (ဂိဟီတိ မံ ဓာရေဟိ)
၁၆.အကျွန်ုပ်ကို ဥပါသကာဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (ဥပါသကောတိ မံ ဓာရေဟိ)
၁၇.အကျွန်ုပ်ကို အရာမ်စောင့်၊ ကျောင်းစောင့်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (အာရာမိကောတိ မံ ဓာရေဟိ)
၁၈.အကျွန်ုပ်ကို ရှင်သာမဏေဟူ၍ မှတ်တော်မူပါလော့။ (သာမဏေရောတိ မံ ဓာရေဟိ)
၁၉.အကျွန်ုပ်ကို တိတ္ထိ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီး ) ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (တိတ္ထိယောတိ မံ ဓာရေဟိ)
၂၀.အကျွန်ုပ်ကို တိတ္ထိတပည့်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (တိတ္ထိယသာဝကောတိ မံ ဓာရေဟိ)
၂၁.အကျွန်ုပ်ကို ရဟန်းမဟုတ်တော့ဟူ၍ မှတ်ပါလော့။ (အသမဏေတိ မံ ဓာရေဟိ)
၂၂.အကျွန်ုပ်ကို သာကီဝင်မင်းသား ဘုရားသားတော်မဟုတ်ဟူ၍ မှတ်ပါလော့၊ (အသကျပုတ္တိယောတိ မံ ဓာရေဟိ)
၂၃.ဘုရားသည် ငါ့အတွက် အကျိုးမရှိ၊ တော်ပြီ၊ တန်ပြီ၊ (အလံ မေ ဗုဒ္ဓေန)
၂၄.ဘုရားသည် ငါ့အတွက် ဘာလုပ်ဖို့လဲ၊ (ကိံ နု မေ ဗုဒ္ဓေန)
၂၅.ငါသည် ဘုရားကို အလိုမရှိပြီ၊ ဘုရားသည် ငါ့အတွက်မလိုတော့ပြီ၊ (နအတ္ထော မေ ဗုဒ္ဓေန)
၂၆.ငါသည် ဘုရားလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ပြီ၊ (သုမုတ္တော ဟံ ဗုဒ္ဓေန)
အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ထားသော သိက္ခာချ စကားလုံး ၂၆-လုံး တို့အနက် တစ်လုံးလုံးကို ပါဠိဘာသာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မိမိနားလည်ရာအခြားဘာသာ စကားဖြင့်ဖြစ်စေ ရွတ်ဆိုခွင့်ရှသည်။ ဘုရားကို စွန့်ခဲ့ပြီဟု အတိတ်ကာလဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘုရားကို စွန့်တော့မည်ဟု အနာဂတ်ကာလဖြင့် လည်းကောင်း ပြောဆိုလျှင် သိက္ခာမကျချေ၊ စွန့်ပါ၏ဟု ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြင့် ပြောဆိုမှသာ သိက္ခာကျသည်။ သိက္ခာချရာ ယောက်ျား မိန်းမ မည်သူ့ထံ မဆိုသိက္ခာချနိုင်၏။ နားထောင်သူ အနေဖြင့် ဤရဟန်းသည် သိက္ခာ ချသည်ဟု ချက်ချင်းနားလည်ရမည်။ ဖြေးဖြေးစဉ်းစားပြီးမှ (သူတပါးရှင်းပြမှ) နားလည် လျှင် သိက္ခာမကျချေ။
ထို့ကြောင့် ၀ိနည်း နားလည်သူအထံ တွင်သာသိက္ခာချသင့်၏။ ၀ိနည်းနားမလည်သူ ထံ သိက္ခာချလိုပါက သိက္ခာချခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ကြိုတင်ရှင်းလင်း ပြောပြပြီး နောက်မှသာ သိက္ခာချသင့်သည်။ (ဒါကြောင့် ၀ိနည်းကို နားလည်သင့်တယ် ဆိုတာ ဒါလို အချက်တွေ ကြောင့် အရှေ့မှာ ရေးခဲ့တာပါ ) ထို့ပြင်မြန်မာစကား မတတ်သူထံ မြန်မာဘာသာဖြင့် သိက္ခာချလျှင် ပါဠိစကားမတတ်သူထံ ပါဠိဘာသာဖြင့် သိက္ခာချလျှင်၊ သိက္ခာမကျချေ။ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ရှေ့္ပ လည်းကောင်း၊ သစ်ပင် လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်ထံ လည်းကောင်း သိက္ခာချလျှင် သိက္ခာမကျချေ။
ဤခေတ်္ပ ဒုလ ’ဘရဟန်းခံသူတို့သည် သိက္ခာကျအောင် သိက္ခာချဖို့ အရေးကြီး၏။ သိက္ခာမကျဘဲ လူဝတ်လဲ၍ မိမိအိမ်ပြန်လာပါက သင်္ကန်းဝတ်စဉ်က ပါရာဇိကမကျဘဲ ပုဆိုးဝတ်ပြီးမှ ပါရာဇိကကျမည်ကို သတိပြုသင့်ကြသည်။
အနာမာသ၀တ္တုများ (ရဟန်းများမထိမကိုင်ကောင်းသောအရာဝတ္တုများ )
၁. မာတုဂါမ = ယနေ့မွေးစ သူငယ်မကိုပင် မကိုင်ရ၊ သာယာစိတ် ရှိလျှင် သံဃာဒိသိသ်အာပတ် သင့်၏။ သာယာစိတ်မရှိသော်လည်း တမင်သက်သက်ကိုင်လျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်၏။ မတော်တဆ ထိမိတိုးမိလျှင် အာပတ်မသင့်။ မိခင်, နှမ စသော ဆွေမျိုးတော် စပ်သူကို မိသားစုချစ်ခင်စိတ်ဖြင့် ကိုင်လျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်သည်။ ရေနှစ်သောမိခင်, ရေတွင်းထဲကျသော မိခင်ကိုပင် လက်ဖြင့် မဆွဲမကိုင်ရ၊ ၀ါးလုံး, ကြိုး စသည်ကို လှမ်းပေး၍ ဆွဲတင်ကယ်ဆယ်ရမည်။ လက်ကိုလှမ်းဆွဲပါဟုမပြောရ၊ ကြောက် အား လန့်အားဖြင့် လာရောက်ဆွဲကိုင်ဖက်ထားပါမူကမ်းစပ်ရောက် အောင် ကူးခပ်လာရမည်။ အာပတ်မသင့်ချေ။ မိမိ၏ ကာယပယောဂ,၀စီပယောဂ မပါစေရ။
၂. မာတုဂါမ၏ အသုံးအဆောင်၊
၃. မာတုဂါမ၏ ရုပ်ပုံ, ဓာတ်ပုံ, ရုပ်ထု၊
၆. ထန်းသီး, အုန်းသီး, ငှက်ပျောသီး စသော အသီးအမျိုးမျိုး၊
၇. ပုလဲ, ပတ္တမြား, ရွှေ, ငွေ စသော ရတနာအမျိုးမျိုး၊
၈. ငွေစက္ကူ, ငွေအင်္ဂါး အသပြာ အမျိုးမျိုး၊
၉. လက်နက် အမျိုးမျိုး၊
၁၀. တူရိယာ အမျိုးမျိုး။
အထက်ပါ ပစ္စည်းဝတ္တုတို့ကို ကိုင်တွယ်သုံးသပ်ပါက ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်သည်။
Than Than သန်းသန်း added4new photos.
May4at 2:10pm ·
ဘယ်​ပြည်​သူကိုမှ လူမထင်​သည့်​ စစ်​​ခွေးအာဏာရှင်​၏ လုပ်​ရပ်​ ​တွေ ရပ်​လိုက်​ကြပါ ကျွန်​မတ်ို့ပြည်​သူ​တွေ သီးခံနိုင်​သည့်​အတိုင်းအတာ ​ကျော်​လွန်​နေပြီ
ဘာတစ်​ခုမှပြည်​အ​ပေါ်​ကောင်းကျိုးပြုခဲ့တာမရှိသည့်​ မဘသ အဖွဲ့စည်း​တွေပါ
ပြည်​ထဲ​ရေးနှင့်​ စစ်​တပ်​က ထိုအဖွဲစည်း​တွေကို တရား ဝင်​ အကာကွယ်​​တွေ​ပေးပြ​နေ​တယ်​
သူရ​ရွှေမန်းနှင့်​ မင်း​အောင်​လှိုင်​ပါ ဆံချပြီး သင်္ကန်းပတ်​ပြီ မဘသ တပ်​မ​တော်​ ​ပြောင်းလဲနာမည်​​ပေးလိုက်​တော့
Than Than သန်းသန်း added6new photos.
April 29 at 12:59am ·
မျိုးချစ်​ဟန်​ပြပြီး သာသနာ့ သင်္ကန်းကို ခုတုန်းမလုပ်​ကြပါနဲ့
သာ​ကေတ ရှိ မွတ်​ဘာသာဝင်​ များ၏ ဝတ်​ပြု အ​ဆောင်​များအား ည၇နာရီအချိန်​မှာ ချိတ်​ပိတ်​လိုက်​ပါသည်
April 28 at 6:57pm ·
သာကေတမှာ အမျိုးယုတ် မဘသ အဖွဲ့အင်အား ၄၀၀ကျော်သည် သာကေတမြို့နယ်အား မီးရှို့ဖျက်ဆီး ရန် လက်နက်အင်အား လူအင်အားအပြည့်ဖြင့် ယ နေ့နံနက် ၉နာရီမှာလူစုပြီး ၁၁နာရီတွင် အဆိုပါ သာကေတ မြို့နယ် တွင်း ဝင်ယောက်ရန်စ ကာ
အာဏာာရှင်သန်းရွှေအားကိုးပြီး လူမိုက်စွမ်းအားရှင်များ ဖြင့် ယခု ပြသာနာရှာဖွေ နေပါသည်
Kyaw Moe ကို ချီးကျူးပါတယ်​
13mar2015တုန်း ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့က စွမ်းအားရှင်လက်ပတ်နီ က ယခု သာကေတ မွတ်ဆလင်စာသင်ကျောင်းအား မဘသအဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်ဖိအားပေးစဉ် သတင်းယူနေသော mmtv သတင်းသများ2ဦးကို ရဲများအရှေ့တွင် အကြမ်းဖျက်ပြီးcaremaကို လုယူခဲ့ပါသည်
သာ​ကေတ အရဗီ​ကျောင်း အကြမ်းဖက်​ခံရသည့်​ ပွဲမှာ မဘသ နဲ့ စွမ်းအားရှင်​ ပူးတွဲ အကြမ်းဖက်​ဆက်​နွယ်​မူကို ပြသလိုက်​တာပဲဗျ
မဘသ​တော့ နာမည်​ ပြန်​​ပြောင်း​တော့မယ်​ထင်​တယ်ီ
ယခု သာကေတ မဘသ တို့ ပွဲကြမ်းသည့်​ Video
အုပ်​ချုပ်​​ရေးမူးအား မဘသ များက အနိုင်​ကျင့့်​နေပုံ Vide 4f
မဘသ တွေက သာကတ မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူးအား ပိတ်စို့ ဖိအား​ပေး၍ ဝိုင်းထားသည် အနီရောင
ယခင်​ အာဏာရှင်​ စစ်​အစိုးရ လက်​ထက်​က ယာယီခွင့်​ပြု​ပေးထား​သော သာ​ကေတ မှ ဗလီဝတ်​ပြု ​ကျောင်း​ဆောင်​များအား
မဘသ အမိန့််​ဖြင့်​ မွတ်​ဗလီများအား ချိတ်​ပိတ်​​နေပုံ
Vodeo5f
ကမာရွတ် တရာရုံးရှေ့က ပလာစတာ ကိုယ်​​တော်​ ဝဇီပိတ်​
ဝီဝီတို့ မျိုးညစ်အုပ်စု ဆန္ဒပြ​နေပြ
ယနေ့ ၂၈ ၄ ၂၀၁၇နေ့တွင်
​အောက်​ပါ Llnk ​ထောက်​၍ share နိုင်​ပါပြီ
”ချေးဘရိန်းတွေနဲ့တော့ ဖြေရှင်းလို့မရပါ – ၁”
EU တစ်ဖွဲ့လုံးက UN ရဲ့ အဓိက Sposor ဆော်ဒီအပါအဝင် မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာရဲ့ ဖိ
အားတွေအတိုင်း ”ကပြ” အသုံးတော်ခံပြီး
ချောင်ပိတ်ရင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော
နယ်က ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေအရေး ဖိအားအ
တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့သတ္တိကတော့ ဒီပြဿနာကြီးရဲ့
ဖန်တီးရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးတွေ၊ ရို
လော်ဘီတွေနဲ့ လုပ်စားခြေရှုပ် ရခိုင်ဒေသ
ရောက် NGO, INGO အဖွဲ့တွေကို ရှက်တတ်
ရင် လဲသေကြလို့ ပြောလိုက်တာပါပဲ။
​ဒီပြဿနာကြီးရဲ့ လက်သည်ဟာ ဒေါ်စု မ
ဟုတ်သလို NLD ပါတီလည်းမဟုတ်ဘူး။
ဒေါ်စု ထုတ်ပေးထားတဲ့ White card တစ်ခု
မှမရှိသလို NLD ပါတီက လာဘ်စားပြီး ခိုး
စည်းမလုံတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ခိုးဝင်
လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီပြဿနာကို ဦးနုလည်းမ
ရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ မရှင်းနိုင်တဲ့အပြင် မဲရရေး အ
ရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မဆင်
ပြင် UN နဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကြောင့် အ
သစ်တွေပါ ထပ်လက်ခံခဲ့ရပြီး မောင်တော
ဒေသကို ကုလားဖုံးလွှမ်းသွားစေဖို့ လမ်းဖွင့်
ပေးသလိုတောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ဒါ
နဝတ၊ နအဖ ခေတ်တွေမှာတော့ နစက၊ လ
ဝက စတဲ့အဖွဲ့တွေ (အားလုံးတပ်က ချုပ်
ပိုင်းမှာ သုနခဘုရားပွဲ တိုးခဲ့တယ်။ အဲဒီကာ
လဟာ မောင်တောဒေသရောက် နစကနဲ့
တာကို လူတိုင်းသိတယ်။ ”အဲဒီလူတွေကမှ
အမျိုးသား သစ္စာဖောက်စစ်စစ်တွေ” ဖြစ်
တာကို သိသိကြီးနဲ့ အဲဒီလူယုတ်မာတွေရဲ့ ဘောကို အားရပါးရ ရှူနေတဲ့ မျိုးချစ်အမည်
တပ် ကတုံးတွေနဲ့ ငတုံးတွေလည်းပဲ ”အမျိုး
သားသစ္စာဖောက်စာရင်းဝင်” တွေချည်းပဲ။ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေပါးစပ်ကထွက်တဲ့
လို အောက်ကလိအာသံ” လို့ပဲ ဆိုချင်တယ်။
သာမက NGO, INGO တွေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုး ပ
ညာတတ် ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေ၊ တရုတ်
ကုမ္ပဏီတွေ၊ ခရိုနီတွေရဲ့ အားရပါးရ လုပ်
စားစရာ ခွင်ကြီးကြီးဖြစ်သွားခဲ့သလို ခိုးဝင်
ခုရဖို့ ကမ္ဘာကို မျက်ရည်ချူစရာ တကယ့်အ
အာဏာရူးတွေအတွက် မဲရရာနယ်မြေ၊ အ
မြေ။ နယ်မြေလိုချင်သူတွေအတွက် ကမ္ဘာ
ကို မျက်ရည်ချူပြရာနယ်မြေကြီး ဖြစ်ခဲ့ပေ
အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် မလုံခြုံမှုကို အကြီး
ရအတွက်လည်း ပြည်တွင်းမှာရော နိုင်ငံတ
ကာမှာပါ ဖြေရှင်းရအခက်ခဲဆုံး ပြဿနာ
ကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်နေရာ ဒေသကြီးဖြစ်နေ
* ဆက်ပါဦးမည် *